:: My Little World ::: December 2007
Posted by Nay Nay Naing at 12/30/2007 09:53:00 PM0comments
Myanmar Movies and Videos
အခုအားလပ်ရက်မှာ အပြင်မထွက်ဖြစ်လို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ အချိန်အများစုမှာ အရင်တုန်းက ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားပြီး ဖတ်ဖို့ကျန်နေတဲ့ ebooks တွေ ဖတ်လိုက်၊ မြန်မာ ဗီဒီယို တွေ ကြည့်လိုက်နဲ့အပြည့်အ၀ အနားယူနေပါတယ်။ အင်တာနက်ကွန် နက်ရှင်ကောင်းရင် Streaming တွေ ကြည့်တယ်။ ကွန်နက်ရှင် နှေးတဲ့ အချိန်ကြတော့ ဒေါင်းလုတ် လုပ်ထားတာတွေ ကြည့်တယ်။ မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ၊ ဗီဒီယိုတွေတော့ မကြည့်ဖြစ်တာ ကြာနေလို့ လားမသိဘူး သူများတွေ တင်ထားသမျှ အကုန်မကြည့်ပဲ ရွေးကြည့်တာတောင် ခုချိန်ထိ ကြည့်စရာ မကုန်သေးဘူး။
MinThiLa - Free Movie Download
Khayan Pyar Ein Met
Yet Another Myanmar Community - Forum
Shwe Dream - Sreaming Videos
Posted by Nay Nay Naing at 12/30/2007 05:07:00 PM2comments
(So) let it rain
It's pourin' all around
(No) it ain't gonna drown me
(Oh, let it rain)
(Let it fall)
(I'm gonna be okay)
Posted by Nay Nay Naing at 12/28/2007 12:09:00 PM0comments
Splashup : Photo editing tool and Photo manager
Computer ထဲမှာ Software တွေအများကြီး မသွင်းထားချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် Web Application တစ်ခုပါ။
ဓာတ်ပုံတွေ Splashup မှာ တင်ပြီး တခြားသူတွေနဲ့share လို့ ရတယ်။
Splashup မှာတင်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုသာမက တခြား Photo Sharing sites တွေဖြစ်တဲ့ Flickr, Facebook နဲ့Picasa မှာတင်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်လို့ရတယ်။
ပုံတွေ ပြင်ဆင်ရမှာ Crop ၊ Resize လုပ်တဲ့ Features တွေပဲရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား pixel controls, layers, blends, filters, brushes, webcam effects, text editing စတဲ့ Feature တွေကိုလည်း အဲ့ဒီ Web Application ကိုသုံးပြီးလုပ်လို့ ရပါတယ်။
Splashup မှာ ပါဝင်တဲ့ Photo editing tools ဟာ Photoshop CS3 မှာ tools နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်လို့ရေးထားတာ ဖတ်ရတယ်။ Splashup ကို စမ်းသုံးကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် CS3 ကို မသုံးဘူးတော့ တကယ်တူမတူ မပြောတတ်ဘူး။
ပုံတွေ edit လုပ်လို့တခါတည်းနဲ့မပြီးနိုင်ရင်လည်း save လုပ်ပြီး နောက်မှ တခါ ပြန်ပြင်လို့ ရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ပုံတွေ edit လုပ်ရာမှာ ပုံတွေ အများကြီးကို တပြိုင်နက် ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။
Splashup သုံးဖို့အတွက် User Login လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် Free Registeration ပါ။
Splashup အကြောင်း တခြားသူတွေ ရေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိချင်တယ်ဆို ဒီအောက်က လင့်တွေမှာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Splashup Review: Not Quite There
Splashup.com - Powerful Photo Editing For Pros, Novices
Credit to THKZ
Posted by Nay Nay Naing at 12/27/2007 05:02:00 PM0comments
နဂိုက အအိပ်နဲရတဲ့အထဲ နည်းနည်းလောက် စိတ်ပင်ပန်း၊ စိတ်ရှုပ်၊ စိတ်အခန့် အသင့်တာတွေကြုံ၊ တစ်ခုခုကို စိုးရိမ်ပူပန်လာတာနဲ့အိပ်မပျော်တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးက ရှိနေတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးအရာကတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်အနားယူရခြင်းပါပဲ။
လူပိန်တာလဲ မပြောနဲ့ လေ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ပိန်တဲ့သူတွေများ ၀ဖို့ သာ ခက်တာ ရှိနေတဲ့ အလေးချိန်လေး ကျသွားဖို့ က အတော်လွယ်တယ်။ အအိပ်ပျက်တော့ အစားပါပျက်ပြီး မရှိမဲ့ရှိမဲ့ အသားလေးတွေ ကုန်ရောပေါ့။
အိပ်မပျော်တဲ့အကျင့်အပြင် နောက်အကျင့် တစ်ခုလည်း ရှိသေးတယ်။ အကျင့်ဆိုးလား အကျင့်ကောင်းလားတော့မသိဘူး။ မနက်စောစော လုပ်စရာတစ်ခုခုရှိ တယ်ဆို Alarm ပေးထားရင်တောင်မှ အဲ့ဒီ Alarm မမြည်ခင် ကြိုပြီးနိုးနေတာ များတယ်။ Alarm မြည်သံကြောင့် နိုးသွားရတယ်ဆိုတာ အတော်လေးရှားတယ်။ ပုံမှန်နေ့ စဉ်အလုပ်သွားဖို့မနက်စောစောမှာလည်း နိုးစက်ထက်အရင် လူက နိုးနေတာ များပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို စိတ်စော နေတတ်တာကြောင့်ပဲလားတော့ မသိဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့Plan ရှိနေတယ်ဆို တခြားအလုပ်တွေ ဘယ်လောက် အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ၊ အဲ့ဒီ အချိန်မတိုင်ခင်မှာ သတိရသွားတာ များပါတယ်။ သိစိတ်ထက် မသိစိတ်က ပိုပြီး အားကောင်းနေတာကြောင့်လား မသိ။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်တောင်မှ သိတာထက်စာရင် မသိတာတွေက ပိုများနေပါရောလား။
အိပ်မပျော်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိပ်ခါနီး ဘာမှမတွေးနဲ့ ၊ တရားထိုင်၊ ဘုရားစာရွတ်၊ နံပါတ်တွေကို ၁ကနေစပြီး ရေတွက်ကြည့်၊ အိပ်ရာထဲလှဲနေပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ကိုယ့်ကို စိတ်ပျော်ရွှင်စေမယ့် စိတ်ကူးလေးတွေကိုပဲ တွေးကြည့်နေလိုက်၊ အိုး... စုံနေတာပါပဲ။ နှစ်ပေါင်း များစွာ အတွင်း အကြောင်းသိ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက နည်းလမ်းမျိုးစုံ ပြောပြကြ၊ အကြံပေးကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ နည်းမျိုးစုံထဲက မလုပ်ကြည့်ဖူးတာဆိုလို့အိပ်ခါးနီး အရက် ဒါမှမဟုတ် ၀ိုင်သောက်ပြီး အိပ်ဆိုတာရယ်၊ အိပ်ဆေးသောက်ပြီး အိပ်ဆိုတာရယ် နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ အရက်တို့ဝိုင်တို့ ဆိုတာကလည်း သောက်ကျင့် မရှိ ၊ အကျင့်လည်း မလုပ်ချင်တာနဲ့မသောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အိပ်ဆေးကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အားဆေးတွေသောက်ရလွန်းလို့အခုအချိန်မှာ ဆေးဆို ဘာဆေးမှ သောက်ချင်စိတ် မရှိတော့တာကြောင့် မသောက်ဖြစ်တာပါ။ တစ်ယောက်တည်း အိပ်မပျော်ရင် သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်သွား အိပ်တဲ့။ ဒါကလည်း လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီနေ့ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ်နဲ့အဲ့လောက်အထိ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေ ဒီမှာ မရှိဘူးလေ။ ကျောင်းနေတုန်းက အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆို တစ်မျိုးပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က အချိန်တွေကို သတိရမိတယ်။
ခုတော့ လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်၊ လူပင်ပန်းရင် ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ကြောင့် အိပ်မပျော်ပါစေ၊ လူက ပင်ပန်းပြီး အချိန်တန် အိပ်ပျော်သွားမယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောတဲ့ နည်းကိုပဲ အများဆုံး အသုံးပြုဖြစ်တယ်။ ဒါလည်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လေ့မရှိတာကြောင့် လမ်းများများလျှောက်တာဖြစ်အောင် ကြိုးစားတာရယ်၊ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်၊ သာမန်ထက်ပိုလို့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပင်ပန်းအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ စိတ်ရှုပ်တဲ့အချိ်န်ဆို အလုပ်ပိုပြီးတယ်ဆိုပြီး အလုပ်ရှင်တွေက သဘောကျ၊ အိမ်သန့် ရှင်းတယ် ဆိုပြီး အတူနေသူတွေက ပိုပြီးများ နှစ်သက်ကြလေမလား မသိဘူး။ လူပဲ တကယ် ပင်ပန်းလာရင် ဘယ်နှစ်ရက် မအိပ်ပဲ နေနိုင်သလဲ။ ခံနိုင်ရည် ကုန်တဲ့ နေ့ ကြရင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားတော့ တာပေါ့။ တကယ်တော့ အဲဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းပါဘူး။ အိပ်ရေးစပျက်တဲ့ ရက်ကနေ အိပ်မပျော်ခင် ရက်အထိ လူက အတော်လေး ခံရတာများတယ်။ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် စိတ်ဆိုတာမျိုးကလည်း ပြောရခက်သား။ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာ အတော်လေးခက်တယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောဖူးသလို ပြောရမယ်ဆို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ တစ်ခုခုရှိလာတိုင်း ညဘက်တွေမှာ အိပ်မပျော်ဖြစ်တာ စိတ် မထားတတ်တာလို့ဖြစ်ရတာတဲ့။ တချို့ များ စိတ်ထားတတ်တော့ ဘယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ ဘယ်လောက်ပဲ များနေပါစေ၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်လို အနေအထားမျိုးကို ရောက်နေပါစေ ချက်ချင်း အိပ်ပျော်သွားကြ၊ အဆင်ပြေသလို အိပ်တတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီလို လူတွေကို အခုအချိန်အထိ ကိုယ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ အလုပ်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်နိုင်နေသူတွေလို့ယူဆတာကြောင့် အထင်ကြီး အားကျမိပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/27/2007 11:14:00 AM0comments
ဒီနှစ် ၂၀၀၇ ခရစ်စမတ်ညမှာ သာတဲ့ လ ဟာ တောင်ပပြီး အရမ်းကို လှပနေခဲ့တယ်။ ကံကောင်းတဲ့သူတွေမှ အဲဒီလို တောက်ပနေတဲ့ လကို ခရစ်စမတ်ညမှာ မြင်ခွင့်ကြုံကြရမှာ ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူမြင်နေရတဲ့ လရဲ့ပုံကို ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီး ပို့ ပေးခဲ့ ပါတယ်။ မနေ့ ညက ထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ လ ကို ဘယ်သူတွေများ တွေ့ မိ၊ သတိထားပြီး ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ကြ ပါသလဲ။
Photo Credit to Hong Huei
Labels: Day, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 12/26/2007 01:52:00 PM2comments
Labels: Day, Diary
Posted by Nay Nay Naing at 12/25/2007 05:49:00 PM3comments
Don't even waitalittle while
Posted by Nay Nay Naing at 12/25/2007 02:24:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/22/2007 04:02:00 PM3comments
အားလပ်ရက်တွေ ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ အလုပ်ပါးလို့အများစု ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ၊ ကျွန်မ အလုပ် အရမ်းရှုပ်နေပါတယ်။
How Busy I Am!
အရင်က ဒီလမှာ Production Deployment လုံးဝ မရှိဘူးဆိုလို့တခြားအလုပ်တွေကို အေးအေးဆေးဆေး လုပ်နေရာခဲ့တာ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှ ဒီလ ၁၇ ၊ ၁၈ ၊ ၂၆ ၊ ၂၇ နဲ့၃၁ ရက်တွေမှာ ကျွန်မ တာဝန်ယူထားတဲ့ Application နှစ်ခုလုံးမှာ Production Deployment တွေ အရေးတကြီး လုပ်ဖို့ ရှိတယ် ဆိုပြီး အီးမေး ၀င်လာခဲ့တယ်။ Deployments တွေ အဲဒီလောက် အများကြီး ရှိပြီဆိုတော့ ပင်ပန်းပြီပေါ့။ Deployments အတွက် ပြင်ဆင်စရာတွေ ပြင်ဆင်နေရလို့တခြား ကျွန်မ တာဝန်ယူထားတဲ့ အလုပ်တွေကို မလုပ်ရဘူးလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါလည်းလုပ် ဟိုဟာလည်း လုပ်ဆိုတာမျိုး။ ဟိုအလုပ်တွေကလည်း နေ့ စဉ် အချိန်မဆိုင်း လုပ်ရတာတွေ။ သူတို့ ပို့ လာတဲ့ အီးမေးတွေကို မပြန်ရင်၊ ဖုန်းတွေ ဆက်ကြတော့မယ်။ တခြားအလုပ်တွေနဲ့မအားလို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောလို့ ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးလည် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအပိုင်းမှာ ခုရက်ပိုင်း အလုပ် နည်းနည်းပါးနေလို့ တော်ပါသေးတယ်။
၁၇ ရက်နေ့ က ည ၁ နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ နောက်နေ့ မနက်ကြတော့ ၉း၃၀ ရုံးအရောက် သွားလိုက်ရတယ်။
၁၈ ရက်နေ့ မှာတော့ အားလုံးပေါင်းပြီး စောစောပြန်နိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်လို့ညနက်အောင် မနေလိုက်ရဘူး..
လာမယ့် ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျွန်မ တာဝန်ယူထားတဲ့ Application နှစ်ခုလုံးအတွက် Deployment လုပ်ပေးဖို့ရှိနေတယ် ဆိုတော့ အဲဒီည ဘယ်အချိန်မှ အိမ်ပြန်ရမယ်မှန်း မသိဘူး... တစ်ခါမှာ တစ်ရက်တည်းမှာ နှစ်ခု မလုပ်ဖူးခဲ့ဘူး။ အဲဒီနေ့ မှာ အခန့် မသင့်ရင် အလုပ်လုပ်ရင်း မိုးလင်းသွားနိုင်တယ်..
၂၇ ရက်နေ့ညနေမှာလုပ်မယ့် Deployment ကို ပုံမှန်ထက် ၂ နာရီလောက် စောပြီး လုပ်ရမယ်လို့အချိန်စာရင်းမှာ ပြထားတော့ အဲဒီညမှာ သန်းခေါင်းကျော်အထိ မနေရဘူးလို့မျှော်လင့်ရပါတယ်
၃၁ ရက်နေ့မှာ နှစ်သစ်ကို အလုပ်လုပ်နေရင်း မကြိုပါရစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းနေပါတယ်..
ခုနက သွားတတ်လိုက်ရတဲ့ မီတင်မှာ နောက်လ ၁ ရက်ကနေ ၈ ရက်အထိ ဆက်သွယ်လို့ ရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေရမယ်တဲ့။ စိတ်ပျက်တယ်။ ၂၀၀၈ ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့၊ ၁ ရက်နေ့၊ နှစ်သစ်ကူးနေ့ မှာ လုပ်စရာတွေ ရှိနေတယ်လို့သိလိုက်ရတယ်.. ခုချိန်အထိတော့ အဲ့ဒီနေ့ မှာ အလုပ်မှာ ရှိနေရမယ့် လူတွေရဲ့ နာမည်စာရင်း ဘယ်သူတွေပါတယ် မပြောသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့ အတွက် လိုအပ်တာတွေကို ကျွန်မ တာဝန်ယူ ပြင်ဆင်ရမယ်တဲ့။ ၁ ရက်နေ့ မှာ အလုပ်မသွားပါရစေနဲ့ ။ နောက်ပြီး ၄ ရက်နေ့ညနေမှာလည်း Deployment တစ်ခုရှိတယ်။ ၆ ရက်နေ့ မှာလည်း Application တစ်ခုအတွက် လုပ်စရာ တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၀၈ နှစ်သစ်ရဲ့ ပထမဆုံး စနေ၊တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်မှာ အဆင်မသင့်ရင် အလုပ်သွားရမယ့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ မလွယ်ဘူး။ အဲဒီရက်တွေမှာ အလုပ်လုပ်ရရင် အားလပ်ရက် အစားပြန်ရပေမယ့် မလုပ်ချင်ဘူး။ ကံကောင်းရင်တော့ မလုပ်ရလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ တကယ်ဆို ဒီလကုန်မှာ ကျွန်မအခု တာဝန်ယူထားရတဲ့ Deployment နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နေရာကို သူများကို လွှဲပေးရမယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ နောက်ပိုင်း ဆက်ပြီး တာဝန်ယူရမယ့်သူကိုလည်း လိုအပ်တာတွေ သင်ပေး၊ပြပေး လုပ်နေရတာကြောင့် သာမန်ထက် ပိုပြီး ပင်ပန်းနေတာပါ။ အလုပ်ရှုပ်တာတွေ စုသွားတယ် ဆိုရမှာပေါ့။ နှစ်ကုန်မှာ Bonus သာ မရတယ်၊ အလုပ်ကိုတော့ အရင်ကထက် ၃-၄ ဆ လောက် တိုးပြီး လုပ်နေရပါတယ်။
Labels: Diary, Job
Posted by Nay Nay Naing at 12/19/2007 05:45:00 PM0comments
လျှောက်ကြည့်ရင်း Blog Toy လေး တစ်ခုတွေ့ တာနဲ့့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ ကျွန်မ ဘလော့ကို ဖတ်ပြီး နားလည်ဖို့ ဆို High School လောက် ပညာရေးအဆင့်ရှိရုံနဲ့နားလည် နိုင်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဟုတ်လောက်မယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်မက စိတ်ကူးပေါက်ရာ၊ စိတ်ကူးတည့်ရာတွေ လျှောက်ရေးတာ များတယ် မဟုတ်လား။ High School လောက်တတ်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာတောင် ဒီမှာ ရေးထားတာတွေများတော့ အဲ့လောက်မှ မတတ်ရင် အကုန်ပြီးအောင် ဖတ်နိုင်မယ် မထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ :D
ဒါနဲ့တချို့ ဘလော့တွေများ ရေးထားတာ သိပ်အဆင့်မြင့်လွန်းတော့ Genius အဆင့် ရှိမှသာ သူတို့စာတွေ ဖတ်ပြီး နားလည်နိုင်မယ် ဆိုလား။ အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းက ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ အားကျမိပါတယ်။ တချို့ဘလော့တွေကြတော့လည်း သူတို့ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ပြီး နားလည်ဖို့ ဆို Genius အဆင့်မဟုတ်တောင် Collage ( PostGrad) အဆင့်လောက်တော့ အနည်းဆုံး တတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်းပေးတယ်။
ကိုယ့်ဘလော့အကြောင်း ဘယ်သူတွေ ဖတ်ပြီး နားလည်မယ်ဆိုတာ စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီမှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Labels: Funny, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 12/18/2007 04:12:00 PM7comments
Linux Journal ( January 2008 )
linuxjournal.com က ထုတ်တဲ့ Linux Journal ပါ။ လစဉ်တင်ပေမယ် စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် ပို့ မယ့် သူကလည်း မေ့၊ တောင်းရမယ့် သူကလည်း သတိမရ ဖြစ်နေတာ 2007 August ထုတ် တင်ပြီးကတည်းကနေ အခုအချိန် အထိဆို လအတော်ကြာနေပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ ပို့ ပေးသူက သတိတရပို့ ပေးတာကြောင့် Year 2008 အတွက် ပထမဆုံး ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်၊ January လထုတ်ကို Lunix နှစ်သက်သူတွေ၊ စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဖတ်နိုင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Linux Journal - January- 2008
Credit to : THKZ
Labels: Book, Lunix, Technology
Posted by Nay Nay Naing at 12/18/2007 01:17:00 AM0comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သတင်းပေးတာ နဲ့G2000 WareHouse Sales ကို နေ့ လယ်ပိုင်းမှာ သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပထမ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သွားဖို့ ခေါ်တုန်းက မလိုက်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တခြား သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ သွားကြမယ်ပြောလာတော့၊ အိမ်မှာလည်း မနေချင်၊ G2000 ဆိုတော့ အလုပ်အတွက် ၀တ်ဖို့သင့်တော်တာတွေ့ ရင် ၀ယ်လို့ရနိုင်တာ တွေးလိုက်မိလို့လိုက်သွားဖြစ်တယ်။
Sales ချပြီး ရောင်းတဲ့နေရာကို StreetDirectory မှာ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်နားမှာ ဆိုတာ သိလိုက်ရပေမယ့် ထုံစံအတိုင်း လမ်းတွေ အသေအချာ မမှတ်မိတာနဲ့Toa Payoh MRT အထိ ရထားစီးပြီး အဲ့ဒီကမှ တဆင့် Taxi စီး သွားလိုက်တယ်။ သိပ်မဝေးတော့ Taxi ခ $S4လောက်ပဲ ပေးရပါတယ်။ Taxi မစီးချင်လည်း Toa Payoh MRT ကနေ Bus စီးမယ်ဆို No.8 ကို စီးပြီး သွားလို့ ရပါတယ်။ သိပ်မကြာဘူး။ Macpherson Road - POSB Bank ရှေ့မှာ ဆင်းလိုက်ပြီး လမ်းနည်းနည်းလျှောက်ရင် ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ POSB Bank ရှေ့မှာ Siemens Centre ရှိတယ်။ မသိရင် ကားမောင်းတဲ့သူကို POSB မှတ်တိုင် ရောက်ရင်ပြောလို့ မှာ ထားလိုက်လို့ ရပါတယ်။ သွားရလွယ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးသွားတာဆိုရင် အသွားမှာ Bus စီးမယ့်အစား Taxi စီးသွားတာ အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Potong Pasir MRT ကနေ လမ်းလျှောက်သွားရင်လည်း ရတယ်။ Potong Pasir ကနေ သွားမယ်ဆို နေရာသိတယ်၊ သွားတတ်မယ်ဆို မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲ လမ်းလျှောက်ရမယ်။ Ang Mo Kio မှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကတော့ AMK ကနေ တစ်ခါတည်း Taxi စီးသွားလိုက်တာ အဲ့ဒီနေရာ အရောက် S$7 လောက်ပဲကျတယ် ပြောတယ်။ ဒါက ဘယ်လို သွားလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြာင်း။ အဲ့ဒီနားမှာ Levis ကို လျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းလေ့ရှိတဲ့ နေရာလည်းရှိတယ်။
ဟိုမှာ ဘာတွေရောင်းနေလဲ။ ကျွန်မ ကတော့ အဲ့ဒီကို သွားသာ သွားဖြစ်လိုက်တယ် ဘာတစ်ခုမှ မ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီမှာ ဈေးချရောင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးဝတ် တွေထဲမှာ ကျွန်မနဲ့အဆင်ပြေတာ ဆိုလို့တစ်ခုမှ မတွေ့ မိဘူးလေ။ ကုတ်အိင်္ကျီတွေနဲ့စတိုင် ဘောင်းဘီတွေ၊ Skirt တွေတော့ တွေ့ ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုမှ ၀တ်လို့ တော်မှာ မဟုတ်တဲ့ Size တွေပဲ ရှိမယ်ဆိုတာ သိနေတာကြောင့် အသေအချာတောင် မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သင့်တော်တာတွေ့ ရင် ၀ယ်မယ် စိတ်ကူးထားတဲ့ မိန်းမ၀တ် ရှပ်အိင်္ကျီတွေတော့ မတွေ့သလောက်ပဲ။ မိန်းကလေး အ၀တ်အထည်တွေ သိပ်မကျန်တော့တာ ကျွန်မတို့ သွားတဲ့အချိန်က ညနေ့ ဖြစ်နေလို့ လားတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေး ၀တ်တွေကတော့ အတော်များများ ရှိနေတယ်။ အတူသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ တစ်ယောက်ကို ၃-၄ ထည်စီလောက် ၀ယ်ကြတာတွေ့ ရတယ်။ Size တွေကတော့ အစုံမရှိဘူးတဲ့။ ပြောကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက် Size တွေတော့ ရှိသေးလို့ဝယ်နိုင်တာ ဖြစ်မှာပါ။ ဘာမှ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ ဒါတောင် လျှော့ရောင်းတာ ၂ ရက်မြောက်နေ့ ပဲရှိသေးတာပါ။ အဲ့ဒီ WareHouse Sales က 25 December အထိလို့ကြေညာထားပါတယ်။ အ၀တ် ထုတ်ကြီးတွေ တွေ့ တယ် ဆိုတော့ အဲဒီ အထုတ်သစ်တွေ ထပ်ဖောက်အုံးမယ် ဆိုရင် ၀ယ်စရာတွေ ရှိမှာပေါ့။ ထပ်မဖောက်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ၀ယ်စရာ ဘာမှရှိတော့မယ် မထင်။
သူငယ်ချင်းတွေ အ၀တ်တွေရွေးနေတုန်း ကိုယ့်မှာလဲ ၀ယ်စရာ၊ ရွေးစရာမရှိတာနဲ့ဟိုဘက် လျှောက်လိုက်၊ ဒီဘက် လျှောက်လိုက်နဲ့အ၀တ်တွေ ၀ယ်နေ၊ ရွေးနေတဲ့ သူတွေကို လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ မသွားခင်ကတည်းက အဲဒီသွားပြီး ပြန်လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းက မြန်မာတွေ အများကြီးပဲ တွေ့ တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်းပေးပါတယ်။ သူပြောတုန်းက ဟုတ်လားလောက်ပဲ ပြန်ပြောမိတယ်၊ ကိုယ်တကယ်ကြုံမှ သူပြောတဲ့ များတယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်များလည်း သိလိုက်ရတယ်။ စကားပြောသံတွေအရတော့ အဲဒီ အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူနည်းနည်းလေးမှာ မြန်မာတွေက တ၀က်ကျော်လောက် ရှိမယ် ထင်တယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဈေးဝယ်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာနဲ့Bus စီးပြီး အော့ချက်သွားဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ Orchard မှာ သူငယ်ချင်းတွေ shopping လုပ်တဲ့ နောက်ကို လိုက်ပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နည်းနည်း လုပ်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဝယ်လို့ ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ အတော်ဆာနေပြီ။ ဒါနဲ့CityHall သွားပြီး အင်းလေးမှာ ထမင်းစားဖြစ်တယ်။ ဖုန်းကတ်လည်း ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၁၀ နာရီလောက်ရှိနေပြီ။ ရေမြန်မြန်ချိုးပြီး အင်တာနက်တောင် မသုံးနိုင်တော့ပဲ တန်းပြီး အိပ်ရာဝင်ဖြစ် သွားပါတယ်။ အပြင် မထွက်တာကြာလို့ လား မသိဘူး၊ ဒီနေ့အတော်လေး ပင်ပန်းသွားတယ်။ မစီးဖြစ်တာကြာတဲ့ Bus စီးလိုက်ရလို့ ပဲလား၊ လမ်းလျှောက်ရတာ များသွားလို့ လားတော့ မသိပါဘူး။ အားလပ်ရက်မှာ ဘာတွေရှုပ်လို့ရှုပ်မှန်းမသိ ရှုပ်နေပြီး ဘယ်မှ မထွက်ဖြစ်၊ မသွားဖြစ်တာ အတော်ကြာနေပြီလေ။ အခု အားလပ်ရက်မှာတော့ ကတော့ သူများတွေ ဈေးဝယ်ထွက်ရာ လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ဒီတစ်ပတ် ကြာသာပတေးနေ့အလုပ်ပိတ်တယ် အင်း... အဲဒီနေ့ မှ ကိုယ့်အတွက် လိုတာလေးတွေ ထွက်ဝယ်ဖို့ကြိုးစားကြည့် လိုက်ပါအုံးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/17/2007 11:30:00 AM2comments
G2000 Warehouse Sales
14 to 25 Dec 07
Price Club Pte Ltd
19A Tannery Road
Bus # 8, 61, 64, 65, 66, 90, 151 & 154
Payment by Cash & NETS only.
Related Links: G2000 Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 12/16/2007 02:35:00 PM0comments
If I knew you and you knew me--
The meaning of your heart and mine--
I'm sure that we would differ less
The "why" of things our hearts would see,
Posted by Nay Nay Naing at 12/14/2007 02:07:00 PM0comments
Make Up Tutorial, Make Up and I
ဟိုရက်ပိုင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အလှပြင်တဲ့ အကြောင်း ထူးထူးခြားခြား စကားစပ်မိသွားရင်း၊ ခုခေတ် တချို့ကောင်မလေးတွေဆို မိတ်ကပ် ပြင်ထားပေမယ့် ပြင်လို့ပြင်ထားမှန်း မသိသာပဲ သဘာဝ အတိုင်းလို ဖြစ်အောင် ပြင်တတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောဖြစ်သွားတယ်။ ပုံမှန် လှလှပပ၊ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လေး နေတတ်သူတွေ အများစုကတော့ အဲဒီလို ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပြင်ရမယ်ဆိုတာ သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ မသိဘူး။ ကျွန်မ နဲ့အရင်းနှီးဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးတွေလည်း သိကြမယ် မထင်ဘူး။
သူငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောပြီး ကျွန်မ တစ်ခါကြည့်ဘူးတဲ့ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရမယ် ဆိုတဲ့ Youtube က Vedio Chip လေးကို ပြန်ရှာကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ YouTube ဖိုင်ကို နေးတစ်ဖိုရမ်က အလှအပ အကြောင်း Topic မှာ ပန်းပွင့်လေး သတင်းပေးထားလို့သိခဲ့ရတာပါ။ ၇ မိနစ်ကျော်ကြာတဲ့ Video မှာ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရလည်းဆိုတဲ့ Conceal dark undereye circles, Mineral Conceraler, Mineral Foundation, Eyebrows, Eyeliner, Curl and mascera, Blush, Lips ဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်ပုံကို ရှင်းပြထားတယ်။ ပြင်ဆင်ပြတဲ့ ကောင်မလေးက ချောချောလေးမို့အဲ့လောက် ပြင်ယုံလေးနဲ့လှနေတာလားတော့ မသိဘူး။ အတော်လေး ကြည့်ကောင်းတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အချိန်ရရင် အဲ့လို ပြင်ကြည့်ကြပါ။ သူလို့ဖြစ်မဖြစ်လည်း ပြန်ပြောပြပေါ့လေ။
Natural Looking Makeup Tutorial by MichellePhan
Makeup and I
တကယ်ဆို မိတ်ကပ်ဆိုတာ ကျွန်မနဲ့လုံးဝ သက်ဆိုင်တဲ့၊ မပတ်သက်ခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်မ မှတ်မိသလောက်ဆို မျက်နှာပေါ်မှာ ပေါင်ဒါလေး ရိုက်ပြီး နှတ်ခမ်းနီးလေး ဆိုးဖြစ်ခဲ့တာတောင် ၂၀၀၁ လောက်က နောက်ဆုံး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းက ဒီတိုင်း မျက်နှာပြောင်နဲ့မကောင်းပါဘူး၊ တစ်ခုခုလိမ်းပါအုံး ဆိုပြီး သူ့ ပစ္စည်းတွေ လာပေးလို့့ အဲဒီလောက် လုပ်ဖြစ်သွားတာ။ အဲ့ဒီ မတိုင်ခင်ကလည်း မိတ်ကပ်လိမ်းလေ့ မရှိသလို၊ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလည်း လိမ်းလေ့ မရှိဘူး။ ရန်ကုန်မှာ နေတုန်းကတော့ အိမ်နေရင်းဆို အမေပြောလို့့ သနတ်ခါး ပါးကွက်ကြား အမြဲလူး ဖြစ်ပေမယ့်၊ အပြင်ထွက်တာနဲ့အကုန်ဖျက်ပြီး မျက်နှာပြောင်နဲ့ပဲထွက်လေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အမေ နဲ့အတူ မနေထဲက မျက်နှာပြောင်ပဲ။ လောကကြီးကို မကျေနပ်လို့တမင်မျက်နှာပြောင်တိုက် နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အေးတဲ့ နေရာမှာ နေခဲ့ရတုန်းက ဆောင်းတွင်းတွေမှာ အရမ်းအေးပြီး အသားပတ်လာရင်တော့ တစ်ခုခု ၀ယ်ပြီး လိမ်းဖြစ်ခဲ့ပါ သေးတယ်။ ခုနေတဲ့ နိုင်ငံလည်းရောက်ရော ဘာမှ ၀ယ်မလိမ်းဖြစ်တော့ဘူး။ ၀ယ်ပြီး မလိမ်းဘူးဆိုလို့သူများဝယ်ပေးလို့အလကား လက်ဆောင်ရတာ တွေရော လိမ်းလားဆို၊ မလိမ်းဖြစ်ပါဘူး။ ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က လက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းနီတွေ၊ မိတ်ကပ်တွေ ၀ယ်ဖို့ သွားကြည့် မိပါတယ်.. ဈေးတွေကြည့်ပြီး လန့် သွားလို့တခြားပစ္စည်းတွေပဲ ၀ယ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ အလှပြင် ပစ္စည်းတွေ တစ်ခါမှ မ၀ယ်ဘူးလို့အရောင်တွေ ဘာတွေ၊ ဘယ်ပစ္စည်းကောင်းလဲ မသိ၊ မရွေးချယ်တတ်ဘူး ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေလေးပဲ ပေးလိုက်တယ်။ အမှန်တကယ်ကတော ဈေးကြီးလို့ ၊ မတန်ဘူး ထင်လို့ ပါ။ ကိုယ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ အရာမို့ထင်ပါတယ်၊ အဲဒီလောက် ဈေးပေးပြီး ၀ယ်ရအောင် တန်တယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ ဒီအလှအပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အဲ့ဒီလောက် ဈေးကြီးမယ်လို့လုံးဝ မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးလေ။ အဲ့ဒီကျတော့မှ အလှအပမပြင်တဲ့ အတွက် အကုန်အကျ သက်သာမှာပဲနော်ဆိုပြီး ဘာလို့ပြောကြလည်းဆိုတာ နားလည်သွားတော့တယ်။
နောက်ပြီး အလှမပြင်တဲ့အတွက် ကောင်းတာတစ်ခုက အကုန်အကျသက်သာယုံမက၊ အပြင်သွားမယ်ဆို ရေချိုး၊ အ၀တ်လဲ၊ ခေါင်းဖီးတာလောက်ပဲ လုပ်ဖို့ လောက်လိုတာဆိုတော့ အချိန်ကုန် အရမ်းသက်သာ ပါတယ်။ အလှအပ မပြင်ပဲနေလို့အလှအပကို မကြိုက်ဘူးလာဆိုတော့ လူပဲ လှတာလေးတော့ ကြိုက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လှအောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလည် မသိ၊ သိအောင် လေ့လာဖို့ လည်း အချိန်မပေးချင်၊ အလှအပ အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့ ပစ္စည်းဈေးတွေ ကြည့်ပြီးလန့် ၊ ဒီတိုင်းနေတာ အကောင်း ပြင်လိုက်မှ ကိုယ်မလှမှန်း ပိုပြီး သိသာသွားမယ် ထင်၊ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် နေတတ်တဲ့သူဟာ အမြဲပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေမှ ကောင်းတာလို့ လည်း ယုံကြည်ပြီး အဲဒီလို အမြဲပြင်ဖို့ လည်း စိတ်မရှည် စတဲ့ အကြောင်းကြောင်းတွေ ပေါင်းလိုက်တော့ အခုအချိန်အထိ ကျွန်မ လောကကြီးကို မျက်နှာပြောင်တိုက် နေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း အသက်လေးက ရလာတော့ Skin care လေးတော့ လုပ်ဖို့ လိုလာမယ် ထင်တယ်။ ဒါလည်း စိတ်ကူးသာ ရှိတာပါ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး။
Michelle Pan ရဲ့ YouTube Profile မှာ တခြား အလှအပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြင်ဆင်ပုံတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အခုလက်ရှိတော့ ဒီဟာလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။
Eyeliner Tutorial - Pencil, Cream/Gel, Liquid
Basic Smoky Eye Tutorial
Credit to panpwintlay from NativeMyanmar and MichellePhan
Labels: Diary, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 12/13/2007 10:55:00 PM0comments
Cartoon: Story ofaJava Rebel
Java Rebel ရဲ့ ကြော်ငြာပါ။ "This isastory of an enthusiastic Java programmer who found JavaRebel and how it changed him forever. " လို့ဆိုထားတယ်။
ဒီလင့်လေးလေးရတုန်းက Title မှာ A Java Programmer's Nightmare လို့ရေးထားတာနဲ့ချက်ချင်း ဖွင့်ကြည့် ဖြစ်သွားတယ်။ DZone မှာ ဒီလို့နာမည်တပ်ထားတယ်လေ။ DZone မှာ လင့်တင်တုန်းက ကြော်ငြာကို ကြော်ငြာလို့ထားလို့ဆိုလား ZeroTurnAround's Blog မှာ ပြန်တောင်းပန်ထားတာလည်း တွေ့ ရသေးတယ်။ ထားပါ။ Java Rebel ဟာ သူ့ ရဲ့ ကြော်ငြာထဲကလို ဟုတ်မဟုတ်တော့ နောက်မှ စမ်းကြည့်ရအုံးမယ်။ အခုရက်ပိုင်း အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့စမ်းဖို့ ၊ ဖတ်ဖို့အချိန်မရ သေးဘူး။
Labels: Cartoons, Funny, Technology
Posted by Nay Nay Naing at 12/10/2007 03:22:00 PM0comments
At New Home
အခုတော့ လူရော.. ရှိသမျှ ပစ္စည်းတွေရော.. အိမ်အသစ်ကို ရောက်သွားပါပြီ။ အင်တာနက်လည်း သုံးလို့ရသွားပါပြီ။ နေရာအသစ်၊ အခန်းအသစ်မှာ အခြေကျအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ခုရက်ပိုင်း ရာသီဥတုကလည်း မိုးတစွတ်စွတ်နဲ့နေလို့သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒီတစ်ခေါက် အိမ်ပြောင်းတာ လူရော၊ စိတ်ရော အတော်ပင်ပန်း သွားတယ်။ နောက်ပြီး လူတွေ အကြောင်းလည်း ပိုသိလိုက်ရတယ်။ ဘာတွေ ပိုသိလည်းဆို လူသားပီသလွန်းတဲ့ လူတွေအကြောင်းလို့့ပဲပြောရမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေ့ အကြုံ တစ်ခုရတယ်လို့ ပဲ သဘောထားလိုက် ပါတယ်။ နောက်ဆို ရှောင်ရန် ဆောက်ရန် အချက်တွေ၊ ဘယ်လိုလူတွေ ပေါင်းသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုလူတွေကို ဝေးဝေးရှောင်ရမယ် ဆိုတာ ပိုသိလာတာ ကိုယ့်အတွက် တစ်မျိုးကောင်းတာပေါ့။ ဒါနဲ့ကျွန်မ အခုနေရာ အသစ်မှာ အနည်းဆုံး ၆ လ လောက်တော့ နေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေရင်တော့ ဒီထက်ကြာကြာဆက်နေဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
အိမ်ရှာရာမှာ လူအား၊ နှုတ်အား နဲ့ကူညီကြသူ အားလုံးနဲ့စိတ်ညစ်လို့ဖုန်းဆက်တိုင်း နားထောင်ပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အိမ်ဝယ်ဖို့ လည်း စိတ်ကူးမရှိတော့ ဒီမှာ နေသမျှတော့ အိမ်ပြောင်းတဲ့ဒုက္ခ ကြုံတွေ့ နေရအုံးမှာပါပဲ.. တစ်ယောက်တည်း ပြောင်းရရွှေ့ ရ၊ အိမ်ရှာရတာ အဆင်မပြေမှာ သေချာနေတော့... နောက်တစ်ခါ အိမ်ပြောင်းဖို့ကြုံလာရင်လည်း ခုလိုပဲ တတ်နိုင်သလောက် ထပ်ပြီး ကူညီကြပါအုံးလို့ခုထဲက ကြိုတင် အကူအညီ တောင်းထား လိုက်ပါတယ်။ :D
Posted by Nay Nay Naing at 12/09/2007 08:15:00 PM0comments
Friends Are ....
အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုရဲ့ လူအများမသိတဲ့ သတင်း၊ အတင်းဆိုလည်း.. အတင်းပေါ့ ... ဒါမျိုးတွေ ပြောမယ်ဆို ကိုယ်နဲ့အမြင်တူမယ့် ယုံကြည်ရသူတွေကိုပဲ ပြောမှ ဖြစ်မယ်... မဟုတ်ရင် ပြဿနာပေါင်း များစွား ရှင်းလို့ ပြီးတော့မယ် မထင်...
ရန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကို တကယ် နာအောင် ချမယ်သူတွေနဲ့တစ်ယောက်ချင်း ရန်ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ :D အဲ.. တကယ်ချ ရတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဘက်က အဖော်လေးနဲ့ မှ ...
Posted by Nay Nay Naing at 12/07/2007 11:27:00 AM0comments
The 10 Most Marketable Web Development Skills
ခုရက်ပိုင်း အလုပ်တွေကရှုပ်၊ အိမ်မှာလည်း အင်တာနက် သုံးလို့ မရသေးတော့ သတင်းတွေကို အရင်ကလောက် မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့ တော့ အလုပ်ရောက်တာ နဲ့လုပ်စရာရှိတာတွေ မြန်မြန်လုပ်ပြီး အချိန်ရအောင်ယူလို့သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ ဖတ်မိသမျှ အကြောင်းအရာတွေထဲက Artical တစ်ခုကို သဘောကျသွားတယ်။
တိုက်ဆိုင်တယ် ဆိုရမလား၊ ကျွန်မ ခုရက်ပိုင်း Ruby ဆိုတာဘာလဲ၊ Perl ဆိုတာဘာလဲ၊ PHP နဲ့Python ဘာကွာလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ က မေးတာကြုံနေရတယ်။ Web Developement နဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာလေ့လာရမလဲ မေးတာတွေလည်း ကြုံတွေ့ ရတယ်။ ဘာကြောင့် ဟိုဟာမသုံးပဲ ဒီဟာသုံးတာလည်း ဆိုတာမျိုးတွေကလည်း မေးကြသေးတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်လေတော့ တချို့ မေးခွန်းတွေကို သူတို့ နားလည်အောင် ဖြေရတာ အတော်လေး ပင်ပန်းတယ်။ တကယ်ဆို အားလုံးက သူ့ ဟာနဲ့ သူတော့ ကောင်းနေကြတာ ပဲလေ။ နောက်ပြီး အလုပ်အတွက်၊ အလုပ်ရဖို့ အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပြီး လေ့လာချင်တယ်ဆို ပိုပြီး ဖြေရခက်တယ်။ နိုင်ငံအလိုက် လိုအပ်ချက်တွေကလည်း ကွာခြားတယ် မဟုတ်လား။
The 10 Most Marketable Web Development Skills ဆိုတဲ့ Artical မှာ အခု Market မှာ အရေးပါနေတဲ့ Languages 10 မျိုးနဲ့အဲ့ဒီ Programming Language တစ်ခုချင်းစီက ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် အရေးပါတာလဲ နဲ့ဘယ်နေရာမှာ လေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Links တွေနဲ့အချက်အလက်တွေကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။
The 10 Most Marketable Web Development Skills - Read/Write Web
1. ASP & VBScript
2. C# or VB.Net
3. Flash & ActionScript
9. Ruby & Ruby on Rails
10. Structured Query Language (SQL)
သူပေးထားတဲ့ Languages တွေ အစီအစဉ်အတိုင်း Market မှာ Popular ဖြစ်မဖြစ်တော့ ကျွန်မလည်း သေချာ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် Web Development ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေ ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်လို့ ထင်မိတာနဲ့မဖတ်မိသူတွေ ဖတ်ဖြစ်သွားအောင် မျှဝေလိုက်တာပါ။
Source : Read/Write Web
Posted by Nay Nay Naing at 12/06/2007 06:13:00 AM5comments
For this I did pray
May all of your problems
Be out on their way
That starts this new day
Posted by Nay Nay Naing at 12/05/2007 09:49:00 PM0comments
တန်းဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့ .. ဒီနေ့ အမျိုးသားနေ့ တဲ့..
၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်... အင်္ဂါနေ့ ..
ကျွန်မအတွက်တော့ ဒီနေ့ ဟာ အဆင်မပြေမှု့တွေ စုပြုံကြုံတွေရတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ပါပဲ..
မနက်မိုးလင်းထဲက ခုအချိန်ထိ ကြုံတွေရသမျှ တစ်ခုမှ အဆင်မပြေဘူး..
စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း... အော်ဟစ်ပေါက်ကွဲ ပစ်လိုက်ချင်နေပြီ...
ဟင်း.... မလွယ်ဘူး... မလွယ်ဘူး...
စင်္ကာပူမှာနေရတာ အတော်လေး မလွယ်ဘူး...
သူငယ်ချင်း ပြောသလိုပဲ.. ကိုယ်မှ ဘာမှ မတတ်နိုင်တာမျိုးတွေပဲလေ..
စိတ်လျှော့... စိတ်လျှော့ပြီး ဖြစ်သမျှ လက်ခံ၊ အဆိုးထဲက အကောင်းရှာပြီး အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားရုံသာ ရှိတော့တာပေါ့..
ဘာကြောင့်များ အဆင်မပြေတာတွေကို တစ်ချိန်ထဲမှာ စုပြုံကြုံတွေ့ ရတာပါလိမ့်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနက်ဖြန်မှာတော့ အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်..
ဒီမနက်ဖြန် အဆင်မပြေလည်း နောက်မနက်ဖြန်ပေါ့...
ကောင်းသော မနက်ဖြန်များကို မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ ပဲ.....
Posted by Nay Nay Naing at 12/04/2007 05:17:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/03/2007 02:40:00 PM2comments
A Great Love?
Me2You ကြိုက်သော သူငယ်ချင်းများနှင့် အချစ် ဆိုတာဘာလဲ သိချင်နေသော၊ အချစ်ကို လိုက်လံရှာဖွေနေကြသော သူငယ်ချင်းများအတွက် :D
Posted by Nay Nay Naing at 12/02/2007 01:18:00 PM3comments
Sweet December, 2007!
The new month, the last month of year 2007, is almost here!
Sweet December to You ALL!!
Posted by Nay Nay Naing at 12/02/2007 01:07:00 AM2comments
Happy November 2007!
နိုဝင်ဘာရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ ..
အနှစ်သက်ဆုံးလ၊ အမျှော်လင့်ဆုံး လတစ်လ...
ဒီနိုဝင်ဘာလ အတွင်းမှာ ...
လိုချင်ပေမယ့် အချိန်မှီ မရတော့မှာ သေချာသွားပြီးဖြစ်တဲ့ အရာတွေ...
ကြားချင်ပေမယ့် လုံးမ၀ မကြားရတော့မှာ သေချာသွားတဲ့ အသံတွေ....
အချိန်မှီ ရမှာ မဟုတ်မှန်း၊ စကားသံတွေ ကြားရမှာ မဟုတ်မှန်း....
သိသလိုလိုရှိနေပေမယ့် လက်သင့်မခံချင်ပဲ မျှော်လင့်နေခဲ့မိတယ်..
လဆန်း ၁ရက်နေ့ ကနေ နောက်ဆုံး ၃၀ ရက်နေ့ အထိ..
ခုဆို ည ၁၂ နာရီ ထိုးတော့မယ်..
မကြာခင် မိနစ်ပိုင်းအချိန်လေးမှမှာ နိုဝင်ဘာလကုန်ဆုံးလို့ဒီဇင်ဘာလကို ရောက်တော့မယ်
စိတ်လျှော့လိုက်ဖို့ သင့်ပြီပေါ့ ...
မရနိုင်တာ သေချာသွားပြီလေ ...
ဒီတစ်လလုံး ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ... ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်..
အိမ်ပြောင်းဖို့ ကိစ္စနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရတာရယ်..
အလုပ်နည်းနည်း များတာရယ်ကလွဲရင် တခြား အရမ်းစိတ်ညစ်ရတယ်၊ စိတ်ရှုပ်ရတယ် ဆိုတာမျိုး မကြုံခဲ့ရဘူး..
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုံးပျော်နေခဲ့တဲ့ရက်တွေ အရမ်း မများပေမယ့် ရှိခဲ့တယ် ဆိုရမယ်..
၂၀၀၇ မှာ Happy November ဆိုတဲ့စကား ...
Posted by Nay Nay Naing at 12/01/2007 12:54:00 PM2comments